Mabasa Okunakidzwa Ekuita Nevana-Wiricheya-akasungwa Vana
Posted on March 22, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Pazera diki, vana vanoda kuziva, vakazara nesimba, uye vanoshuvira kuongorora izvo zvisingazivikanwe. Zvisinei, wiricheya-kusungwa kwevana vanogona kuita zvakasiyana nekuda kwekukamisirwa, kusachengeteka, uye kunzwa asi izvo hazvifanire kuvamisa kunakidzwa nehuhwana hwavo.
Pazasi pane zvimwe zvinonakidza zviitiko zvekuita uchipedza nguva uine vana vari pawiricheya:
Arts & Crafts - Kudhirowa, kupenda uye kugadzira mapurojekiti e DIY zviitwa zvinonakidza zvevana vadiki kuti vafungidzire kufunga kwavo uye nehunyanzvi zvisvike panogumira.
Mitambo & Kudzidzira - Tamba mimwe mitambo uchitora pfungwa dzevana ezvinhu zvichiri kunakidza. Wiricheya yoga kurovedza muviri zvakare kwakanaka kuita.
Ratidza Kunyepedzera - Ichi chinogara chiri chiitiko chinonakidza uye chekugadzira chekuita uye hapana zera rekumisikidzwa kutamba.
Games - Hazvina mhosva kana iri kutamba makadhi, bhodhi mitambo, kana a akaita up game, vana vakasungwa newiricheya havazosiiwi kana vachitamba neboka revanhu.
Wheelchair Art - Iyi inzira huru yekugadzira wiricheya- yakasungwa vana vanonzwa kufara kugara mumafungiro avo. Tendeuka yavo wiricheya kupinda muBatmobile kana humambo hwehumambo. Denga ndiro muganho!
Kuti uwane mamwe mashoko, onai http://living.thebump.com/things-wheelchairbound-kids-15524.html
15 Nzvimbo Dzakanakisa dzekushanyira Vashandisi veWiricheya muLos Angeles, California
Kukwikwidza Vateereri veVashandisi veWiricheya